Ceebaha Farmaajo oo midba mar bannaanka imaaneyso | KEYDMEDIA ENGLISH
Ceebaha Farmaajo oo midba mar bannaanka imaaneyso
Sida ku cad, hadalka TPLF, Farmaajo, wuxuu xiriir, muddo soo jiray la lahaa hoggaankii kooxda gumaadka ugu ba’an u geysatay shacabka Soomaaliyeed, waxaana, arrinkaas, ka marqaati kacaya siyaasaddiisa ku wajahan Itoobiya oo ah inuu hadba kobaha u sido kooxda Addis Ababa ka talisa.
MUQDISHO, Soomaaliya – Maalinba maalinta ka danbeysa, waxaa bannaanka imaanaya, arrimo uu daaha gadaashiisa in muddo ah ku qarinayay Madaxweynihii hore Farmaajo, kaas oo billowgii 2017, indha-sarcaad iyo il-duuf siyaasadeed ku koray xilka ugu sarreeya dalka.
Sida ay wada xasuustaan shacabka Soomaaliyeed, qodobka ugu weyn ee olalihii Farmaajo ee 2016, wuxuu ahaa, “nacaybka Itoobiya”, hayeeshee, dhaqamada shanti sano ee uu xaafiiska joogay iyo xogaha cusub ee soo baxaya, ayaa muujinaya, inuu yahay siyaasiga ugu dhow Xabishada.
Hore, waxa ay shacabku uga warhayeen, inuu 27-kii Bishii Agoosto 2017, oo ku beegan lix bilood iyo 19 cisho, ama kaliya 200 oo maalmood, markii uu xaafiiska joogay, inuu Cabdikariin Sheekh Musse [Qalbi Dagax ] u gacan galiya Tigray iyo siduu kobo qaad u ahaa Abiy Axmed.
Hayeshee, hadda waxaa bannaanka timid, waraaq qarsoodi ah, oo Tigary Peoples Liberation Front (TPLF), 2018 u soo direen, Tayo Political Party (TPP) oo ah xisbi siyaasadeed Farmaajo hoggaamiyo, oo aan aqoonsi rasmi ah heysan.
TPLF, waxa ay xisbiga Farmaajo, ku casuumeen, ka qayb-galka Shirweynahii 13aad ee Jabhadda Xoraynta Shacabka Tigaareega, oo socday September 26 ilaa October 01/2018, kaas oo ka qabsoobay Magaalada Mekele ee Gobolka Tigray ee dalka Itoobiya.
TPLF, waxa ay casuumaaddeeda, ku sheegtay, in ay qiimeynayaan xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya TPLF iyo TPP, kaasoo ay sheegeen inuu muddo soo jiray, waxayna, si aan leexleexad lahayn u gu cusuumeen ka qayb galkaaga furitaanka kalfadhiga shirka.
‘Waxaan si rasmi ah idinkugu marti qaadaynaa inaad soo dirtaan labo ergo, si ay uga soo qayb-galaan xafladda furitaanka shirweynaha’. Ayaa lagu yiri waraaqda ka soo baxday, abhadda Xoraynta Shacabka Tigaray.
Xisbiga Tayo, ee Farmaajo, hoggaamiyo, waxaa lagu wargaliyay in wixii macluumaad dheeraad ah, ay kala xariiraan farriin danabeedka, Mr Kalayu Gebrehiwot, kaas oo ku jiray xubno baarlamaanka Itoobiya sanad ka hor kala laabteen xasaannadii xisbinnimo.
Farmaajo, wuxuu hore kursiga Madaxweynaha ku helay, sheegashada nacaybka Itoobiya, taas oo ahayd qiyaano iyo dhagar, aan dib danbe looga dhagaysan doonin, hayeeshee, layaabka ayaa ah, inuu hadda mar kale, ku ololeynayo wax uu ugu yeeray nacaybka Kenyna, waase riyo maalmeed aan kursi lagu heli doonin.